सार्वजनिक सेवामा जनसम्पर्क : RajdhaniDaily.com
लक्ष्मीविलास कोइराला - February 9, 2021 0
लक्ष्मीविलास कोइराला - February 8, 2021 0
लक्ष्मीविलास कोइराला - January 28, 2021 0
लक्ष्मीविलास कोइराला - January 26, 2021 0
Home बिचार सार्वजनिक सेवामा जनसम्पर्क
प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिक र प्रशासनबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ र हुन्छ । नागरिक सम्प्रभुसत्ताका मालिक हुन् अर्थात् नागरिक शासन प्रणालीका अजस्र स्रोत हुन् । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सम्मान र हित उच्चलाई महत्व दिइएको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीबाहेक अन्य प्रणालीमा प्रशासन र जनताबीच कुनै प्रकारको सम्पर्क सूत्र रहँदैन । नागरिकमाथि शासक प्रशासकको मनोमानी चल्ने भय रहन्छ । नागरिक र प्रशासनबीच सम्र्पक सूत्र तथा नागरिकको सम्मान केवल प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा हुने भएकाले जनताको अनुपम विश्वास पनि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै हुन्छ ।
प्रजातन्त्रको विकासले मात्र राज्य प्रणाली लोक कल्याणकारी एवं मानव स्वतन्त्रता उन्मुख भएको पाइन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यले जनताको हित कल्याण र सुरक्षाका लागि अनेकांै योजना र कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमको सफलता सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धको स्तरमा निर्भर गर्छ । नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध सरकारी सूचना प्रवाहको स्तरमा आधारित हुने गर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता र सरकारनजिक नगिच रहेका हुन्छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनको कार्य जनहित अनुकूल हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा रहेको हुन्छ । सरकारका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि जनविश्वास र जनसहयोगको महत्पूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रशासनले शासकको सेवा गर्ने र जनताको उपेक्षा गर्ने गर्छ भन्ने सन्देश जनतामा पर्न गयो भने नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ । र, यस प्रकारको अफवाह वा अविश्वासले जनता र प्रशासनबीच दूरी बढाउँछ । सरकार र जनताबीच फराकिलो दूरी जनता र सरकार दुवैका लागि लाभदायक हुँदैनन् । सबै प्रकारका गलत फहमी हटाउन जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व प्रशासनको हुन्छ । यद्यपि, गलत फहमी वा अफवाह हटाउन सरकार र जनताकाबीच भरपर्दो र विश्वसनीय जनसम्पर्क कायम गर्नु उचित हुन्छ । सार्वजनिक सेवामा जनसम्पर्क भनेको सरकारी निकायले जनतासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न स्थापना गरेको संयन्त्रलाई बुझ्नुपर्छ ।
सेवा प्रवाह विषय, संगठनात्मक सूचना प्रवाहका विषय वा जनताका गुनासाको सम्बोधनका विषय जनसम्पर्कको कार्य क्षेत्रमा पर्छन् । प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताको सम्पर्कमा रहेर जनहितका कार्य गर्नुपर्छ भने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतालाई जानकारी दिने तथा जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नु पनि पर्छ । जनसम्पर्कको उद्देश्य जनतालाई सूचना दिनु मात्र नभएर जनता के चाहन्छन् सो बुझनु पनि हो । यदि कुनै सार्वजनिक प्रशासकले आफ्नो कार्य गर्ने सिलसिलामा जनताको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सकेन् भने त्यस्तो प्रशासकलाई कुशल प्रशासक मान्न सकिँदैन ।
आजको युग सूचना र पारदर्शिताको युग हो
यसकारण सार्वजनिक प्रशासक जनताका प्रतिक्रिया वा अपेक्षा बुझ्ने र तिनको सही सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ । जनसम्पर्क सार्वजनिक संगठनात्मक संरचनाको एक अंग हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता बढी सक्रिय हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो हक अधिकारको बढी प्रयोग गर्न चाहन्छन् । आफनो हक अधिकारको प्रयोगको सिलसिलामा जनता सार्वजनिक कार्यालय जाने र व्यक्तिगत वा सार्वजनिक विषयमा चासो राख्न खोज्छन् । यसबेला जनताका चासो सही सम्बोधन गर्न सार्वजनिक कार्यालयमा जनसम्पर्क शाखा र जनसम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
जनसम्पर्कको उद्देश्य जनतालाई सम्बन्धित कार्यालयको काम र जिम्मेवारीको विषयमा जानकारी दिने, नागरिक सम्बन्ध बढाउने, जनतालाई संगठनात्मक सूचना प्रवाह गर्ने, प्रशासनिक कार्यको सम्बन्धमा अनुकूल जनमत तयार गर्नु, सरकारी प्रशासकको योग्यता र कार्यक्षमता र कार्यसम्पादन प्रक्रियाप्रति जनतामा विश्वास जगाउने, प्रशासन र नागरिकबीच मधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, संगठनप्रति समय समयमा आउने गलत फहमी हटाउने तथा संगठनात्मक कार्य सम्पादनमा जनताको सहयोग प्राप्त गर्नु हो । यससन्र्दभमा जेडी मिलेटले जनताको चाहना जानकारी गर्ने, जनतालाई सूचना सल्लाह दिने, जनता र प्रशासनबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्ने तथा सरकारका कार्यको जानकारी दिने कार्यलाई जनसम्पर्कका तत्व मानेका छन् । जनताका विचार, माग वा गुनासा सार्वजनिक संगठनमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन्छन् ।
पहिलो, सार्वजनिक रूपमा गरिने विरोध प्रर्दशन तथा आन्दोलन, सभा सम्मेलनमा जनताका आवश्यकता, चाहना र माग उठाइएको हुन्छ । यस्ता विरोध प्रर्दशन सरकारमाथि दबाब दिने कार्यक्रम हुन् । दास्रो, जनताका पक्षबाट संसद् (विद्यायिका)मा जनप्रतिनिधिले जनताका चाहना र आवश्यकताबारे जानकारी दिने वा विषय उठाउने गर्छन् । तेस्रो, प्रेस जनइच्छा अभिव्यक्त गर्ने सर्वाेत्कृष्ट माध्यम हो । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र मोबाइलमा आधारित नेटवर्कको विकास र प्रयोगले प्रेसका अलावा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि जनताका विचार आवश्यकता प्रस्फुटन भएका दृश्यमा आएका हुन्छन् । चौथो, जनप्रतिनिधि रहेका समितिका माध्यमबाट पनि जनताका चाहना र चासा जानकारी हुने गर्छ । पाँचौं, संगठनमा राखिने उजुरी पेटीबाट जनताका गुनासा र उजुरी जानकारी हुन्छ । छैठौं, विभिन्न निकायका अध्ययन प्रतिवेदनबाट तथा सातौं, विभिन्न स्थानको भ्रमण, विभिन्न व्यक्ति वा समुदायसँग भेटघाट वा (विचार चयन) ओपिनियन पोलको माध्यमबाट पनि जनताको जनमत जानकारी हुने गर्छ । जनसम्पर्क नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अत्यन्त नयाँ क्षेत्र हो । सार्वजनिक प्रशासनमा जनसम्पर्कको विषय अत्यन्त पिछडिएको अवस्थामा छ ।
सार्वजनिक सूचना छिरलिएको अवस्थामा रहेको पाइन्छ । जनता सार्वजनिक कार्यालयसम्म गएर सूचना प्राप्त गर्न वा अनलाइन सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । डिजिटल डिभाइड उच्च रहेको छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, आवधिक रूपमा वेभसाइटमा राख्ने, पुस्तकका रूपमा प्रकाशन गर्ने, पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभीबाट प्रसारण प्रकाशन गर्ने तथा विज्ञापन वा प्रदर्शनी वा लोकगायनमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने गरेको पाइन्छ । हरेक वार्षिक बजेट व्यवस्थापिकामा पेस गर्नुपर्ने तथा संवैधानिक आयोगले हरेक वर्ष आफनो वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सरकारको प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्ने, हरेक मन्त्रालय विभागमा प्रवक्ता (सूचना अधिकारी)को माध्यम महत्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक संगठनले आफ्नो सूचना अद्यावधिक गर्ने र नियमित रूपमा प्रवाह गर्ने, सूचनाको हकअन्तर्गत सर्वसाधारण जनतालाई व्यक्तिगत वा सार्वजनिक चासोका सूचना माग्ने र पाउने हक रहेको र सार्वजनिक संगठनमा रहेको सूचना प्राप्त गर्न जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ ।
सार्वजनिक संगठनका जनसम्पर्क शाखाबाट सूचना प्रवाहित भएमा जनता र सरकारबीचको दूरी घट्नेछ
सार्वजनिक निकायको सेवाग्राही होस् वा सूचनाग्राही होस् वा संगठनात्मक क्रियाकलापबाट प्रभावित व्यक्ति वा समुदायले सार्वजनिक कार्यालयमा गएर केही विषयमा बुझनुपर्ने भएमा कहाँ गएर सम्पर्क गर्ने स्पष्ट छैन । सोझै हाकिम खोज्दै जाने हो कि ? कार्यालय सहयोगीलाई जहाँ भेट्यो उही सोध्ने हो कि ? संगठनात्मक स्पष्टता छैन । परम्परागत रूपमा ढोकैमा हुने र भेटिने दर्ता चलानीमा सोध्ने कि ? दर्ता चलानीमा पूर्ण सूचना त हँुदैन । सूचनाको हक भएको सेवाग्राही कार्यालयको ढोकाढोका चहार्दै घुम्नुपर्ने अवस्था सार्वजनिक कार्यालयमा रहेको छ । सार्वजनिक कार्यालयको संगठनात्मक संरचनामा जनसम्पर्क शाखा खोल्ने सुविधा रहेको छैन । कार्यालयमा पाइने सोधपुछ एकाइले जनसम्पर्कको आवश्यकता पूरा गर्दैन । सबै कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । नागरिक बडापत्रबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित पनि गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । नागरिक बडापत्रको उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप संगठनात्मक सेवा र सूचना प्रवाह हुन सकेको पनि छैन । जनसम्पर्क शाखाको अभावमा नागरिक बडापत्र टुहुरो जस्तो देखिन्छ ।
तापनि जनसम्पर्क शाखाको व्यवस्था हुन सकेको देखिँदैन । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले सार्वजनिक निकायको कार्य सम्पादन पद्धति र सूचना प्रवाहमा परिवर्तन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ । मोबाइलमा आधारित सूचना सञ्चार नेटवर्क प्रणालीको विकास र प्रयोगले सार्वजनिक कार्यालयमा पनि ‘वर्क फ्रम होम’को प्रारम्भ, सार्वजनिक सेवा एनिहोयर, एनिटाइम वानस्टप वा ननस्टप रूपमा दिनुपर्ने भएकाले सार्वजनिक कार्यालयलाई चौबिसै घण्टा जाग्राम रहनुपर्ने बनाएको छ । सूचना प्रविधिको जति विकास भए पनि केही सूचना र प्रक्रियाबारे जानकारी दिन जनसम्पर्कको भूमिका रहन्छ भने आपतकालमा त झन् बढी आवश्यकता रहन्छ । सूचना प्रविधिको विकासले सार्वजनिक निकायका कामकारबाही एवं सूचना पोको पारेर वा फायलमा राखेर राख्नुको सट्टा डिजिटलाइज्ड गरेर डाटाबेस खडा गर्नुपरेको छ । सार्वजनिक संगठनका वेभसाइट हरपल अद्यावधिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बढेको छ ।
सूचना प्रवाह गर्न खोजेर मात्र पनि हुँदैन । परम्परागत रूपमा पोको र फाइलमा राखेका सूचना खोज्न कठिन भए पनि धुलोभित्र सुरक्षित हुन्थे । तर, अहिले सार्वजनिक निकायका सूचनामाथि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ह्याकरको कुदृष्टि पर्ने भएकाले सूचनाको संरक्षण र सुरक्षा जोखिमपूर्ण बन्दै गएकाले साइबर अपराधबाट पनि जनसम्पर्क अधिकारी सचेत हुनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भए पनि नेपालमा सरकारप्रति जनताको विश्वास विकास हुन सकेको छैन । जनसम्पर्कका कार्यमा धेरै कमजोरी र त्रुटि रहेका छन् । सरकार र नागरिकबीच केवल औपचारिक सम्बन्ध छ । सरकार जनतालाई कुनै पनि सूचना सजिलै दिन प्रेरित देखिँदैन । कोरोनाको संकटपूर्ण अवस्थामा औषधि र खोप किन्दा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको भनेर संसद्, जनमानस र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भयो । उसैगरी सरकारी आवश्यकता भए पनि महामारीको अवस्थामा महामारीको उपचार गर्नुको बदला सरकार शिलान्यास र उद्घाटनमा रमायो भनेर आलोचना भए । सरकारका हरेक कामप्रति जनतामा शंका पैदा हुनु भनेको सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास शून्य हुनु हो ।
प्रजातान्त्रिक सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी भएको खण्डमा सरकारका प्रत्येक कार्य प्रश्नैप्रश्नले घेरिएका हँुदैनथे र जनताको विश्वास पनि हुन्थ्यो । आजको युग नागरिकको युग हो । सूचना र पारदर्शिताको युग हो । सरकार इमानदार र उत्तरदायी हुने र सरकारका प्रत्येक क्रियाकलाप सर्वसाधारण जनताले जान्ने गरी पारदर्शी हुने हो भने जनताले सरकारलाई विश्वास गर्न थाल्छन् । प्रजातान्त्रिक सरकार आफूले रीतपूर्वक गरेका निर्णयको फेहरिस्त (कानुनले गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक) दिन, सार्वजनिक क्षेत्रमा सिर्जना भएका सूचनाको जानकारी दिन तथा जनताका पक्षमा गरिएका कार्यको जानकारी इमानदारपूर्वक र पारदर्शी रूपमा दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सरकारको प्रतिबद्धता मूर्तरूप दिन सार्वजनिक निकायमा जनसम्पर्क शाखालाई संगठनमा नै व्यवस्था गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन पनि गर्नुपर्छ । परिणामतः सार्वजनिक संगठनका जनसम्पर्क शाखाबाट प्रभावकारी रूपमा सूचना प्रवाहित हुन थालेपछि जनता र सरकारबीच दूरी घट्न थाल्छ र जनताले नै सरकारको पक्षबाट वकालत गर्न थाल्छन् ।
भर्खरै लक्ष्मीविलास कोइराला - January 18, 2021 0
तनावमा अभिनेता सञ्जय दत्त
Not-to-be-missed लक्ष्मीविलास कोइराला - April 17, 2020 0
मुम्बई । बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्त यतिबेला परिवारसँग अलग हुनुपरेका कारण तनावमा छन् । उनकी पत्नी मान्यता दत्त र दुई सन्तान अहिले दुबईमा छन्...
राजनीतिको फोहोरी खेल बन्द गरौ
बिचार लक्ष्मीविलास कोइराला - May 8, 2020 0
विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सन्त्रासले सारा नेपाली आतंकित भइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ दलका नेताले देखाएको राजनीतिक प्रहसन घोर आपत्तिजनक छ । यतिखेर सिंगो सरकार,...
Breaking News लक्ष्मीविलास कोइराला - June 9, 2020 0
प्रदेश ३ लक्ष्मीविलास कोइराला - June 11, 2020 0
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण बनेको परिस्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आगामी असार २ गते स्वदेश र विदेशबाट एक...
अर्थ लक्ष्मीविलास कोइराला - August 7, 2020 0
अर्थ लक्ष्मीविलास कोइराला - December 9, 2020 0
इलाम । इलामको माई नगरपालिका र माङसेबुङ गाउँपालिकामा साढे ६ हजार घरपरिवार सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउने भएका छन् । माई नगरपालिकामा ४ हजार ११५ घरपरिवार...
Not-to-be-missed लक्ष्मीविलास कोइराला - December 19, 2019 0
काठमाडौं । लिच्छवीकालदेखि नै पवित्र उद्यानको रूपमा संरक्षण गरेर राखिएको गोकर्ण जंगललाई सुरुमा राणाहरूले सिकारस्थल बनाए । त्यसपछि पञ्चायतकालमा राजपरिवारले आफ्नो निजी स्वामित्वमा ल्याएर...
आधिकारिक ट्रेड युनियनले भ्रष्टचार विरुद्ध देशव्यापी अभियान थाल्ने
प्रदेश लक्ष्मीविलास कोइराला - December 10, 2020 0
काठमाडौ । सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टचार रोक्ने उद्धेश्यले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले देशव्यापी अभियान थाल्ने भएको छ । भ्रष्टचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आधिकारिक...
Breaking News लक्ष्मीविलास कोइराला - September 10, 2020 0
चितवन । चितवन मेडिकल कलेजमा आज थप एक जना कोरोना सङक्रमितको मृत्यु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका—११ का ६२ वर्षीय पुरुषको आज दिउँसो १२ बजेर...
लक्ष्मीविलास कोइराला - March 5, 2020